အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: တောက်ပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ရရှိဖို့
တောက်ပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ရရှိဖို့
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, February 28, 2010 Sunday, February 28, 2010 Labels: အလှအပရေးရာ
စာဖတ်သူများနဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် တောက်ပ လန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေကို ဘယ်လို ဖန်တီးကြမလဲ ဆိုတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စုဆောင်းထားသမျှ လေးတွေကို အကြံပြု ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်… ညိုးနွမ်း ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အသားအရေနဲ့ဆို လူတွေကြား သွာလာတဲ့ အခါ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ် နည်းစေပါတယ်.. ဒီတော့ စိုပြေ လတ်ဆတ်တဲ့ အသားရေ ရရှိဖို့ အောက်က အချက်လေးတွေကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်…
၁. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားပါ… တစ်နေ့လျှင် နာရီဝက်ခန့် လုပ်နိုင်လျှင် ကောင်းပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှ ချွေးများကို ထွက်လာစေဖြင့် အရေပြားကို သန့်ရှင်းကြည်လင် စေပါသည်။
၂. ရေများများသောက်ပါ။ တစ်နေ့ကို ရေ ဂခွက်မှာ ၁၀ခွက် သောက်သင့်ပါသည်။ ရေသည် ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှား ပေးပြီး အသားအရေကို တောက်ပ လန်းဆန်း စေနိုင်ပါသည်။ ရေ တစ်ဖန်ခွက် အပြည့်ကို သောက်ရခက်လျှင် ရေခွက်ထဲသို့ သံပုရာသီး တစ်စိတ် ညှစ်ထည့်ခြင်းအားဖြင့် သောက်ရ လွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။
၃.သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အသီးအနှံကို များများစားပေးပါ။ ပန်းသီး၊လိမ္မော်သီး၊ တို့ကိုနေ့စဉ် စားပါ။ ပဲနို့၊ မုံလာဥနီဖျော်ရည် စသည်တို့ကို သောက်သုံးပါ။ ၄င်းတို့သည် သားအရေကို စိုပြေလှပစေဖို့ အထောက်အကူ အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၄.နွားနို့ တစ်ခွက် နေ့စဉ်သောက်သုံးပါ။
၅.အပြင်ထွက်ပြီး ပြန်လာတိုင်း မျက်နှာကို ဆပ်ပြာအပျော့စားနှင့် စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောပါ။ မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း moisturizer လိမ်းပေးပါ။
၆. နေ့စဉ်ငါးကြီးဆီ စားပါ။
၇. အဆီများသော ငါးနှင့် ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ ဆာဒင်းငါး စသည်တို့ကို များများ စားပါ…
၈. အသီးအရွက် များများစားပါ။ နေ့စဉ် အရွက်သုပ် တစ်မျိုးမျိုးကို မပါမဖြစ် စားသုံးပေးပါ။
၉. နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ နေပူထဲ မထွက်မဖြစ် ထွက်မည်ဆိုပါက အင်္ကျီလက်ရှည် ၀တ်ဆင်ပါ။
၁၀. ငှက်ပျောသီး၊ သဘောင်္သီး၊ ထောပတ်သီး တစ်မျိုးမျိုးကို နွားနို့နှင့် ရောနယ်ကာ မျက်နှာပြင်ပေါ် လိမ်းခြယ်ပါ။ ၁၀မိနစ်မှ ၁၅မိနစ် အထိထားပြီး ခြောက်သွေ့သွားလျှင် ရေအေးနှင့် မျက်နှာကို ဆေးကြောပါ။ တစ်ပတ် ၂ကြိမ် ပုံမှန် ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် စိုပြေနူးညံ့ကာ တောက်ပသော မျက်နှာပြင် အလှကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ ရှားစောင်း လက်ပတ် အနှစ်ကို မျက်နှာပြင်ပေါ် နေ့စဉ် လိမ်းကျံပြီး ရေအေးနှင့် ဆေးကြောခြင်းကို လဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ညစဉ် အိပ်ရာဝင်တိုင်း မျက်နှာကို စနစ်တကျ သန့်စင်ပါ။ သင့်တော်သော Moisturizer လိမ်းပြီးမှ အိပ်ပါ။
၁၁. နေ့စဉ် အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပါ။ အိပ်ရေးပျက်ဖန် များလျှင်လည်း အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ပြီး မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် မျက်ကွင်းညိုများ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ပါသည်။
၁၂. စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ် များလွန်း လျှင်လည်း လျှင်မြန်စွာ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အားပေး စေပါသည်။
၁၃. ဆောင်းရာသီတွင် ရာသီဥတု အေးသောကြောင့် အသားများ ပတ်ခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုအခါ ဈေးကြီးသော မည်သည့် လိုးရှင်းမှ မလိုဘဲ မြန်မာပြည်တွင် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သော ( Glycerine ) အသားလှဆီရည်ကို ရေနှင့်ရော၍ လိမ်းပါက စိုပြေချောမွတ်သော အသားအရည်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။
လှပကြည်လင် လန်းဆန်းသော အသားအရေပိုင်ရှင်များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေရှင်...
HELLO ဂျာနယ်အတွက် ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ပါ.. စာဖတ်သူများကို ပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်ရှင်..
11 Responses to “တောက်ပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ရရှိဖို့”
အသားအရည်လှချင်တဲ့ သဒ္ဓါ့အတွက်တော့ အရမ်းအသုံးဝင်တာပဲမချောရေ..။ ကျေးဇူးလည်း တင်တယ်။ အလှအပနဲ့ဆိုင်တာများများပြောပြနော်။ ၀ါသနာပါလို့...ဟီးးးးးးး
မ..ကတော့ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဘာမှကို မကြည်တောက်နိုင်ပါဘူး။
အလည်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ချော ရေ။
ကောင်းတယ် ဆောင်းပါးလေး ပြန်ဖတ်မိတော့ ပြန်သတိရပြီး တခါထပ်ဂရုစိုက်မိတာပေါ့။ ၁ရက် ဟိ။
မမလည်း ပျင်းတယ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ၊ အသားအရည်ဂရုစိုက်ဖို့လေ။ညဆို မျက်နှာ မသစ်ဖြစ်တာ ခပ်များများ။ :D
မျှဝေပေးတာ ကောင်းတယ် ချောရေ။
ကောင်းတယ် မိန်းကလေးတွေ သိသင့်တဲ့ အရာပဲနော်
ဒါပေမဲ့ ညီမလေး ကတော့အဲလောက်ထိ မလုပ်နိုင်ဘူး ဖြစ်သလိုပဲနေတာလေ
ငယ်ငယ်ကတည်း အဲဒါကြောင့် အသားအရေတွေ ရွက်ကြမ်းရေကျို လိုပဲသိလား
ဒါတွေ လိုပါဘူး...လှပြီးသားဗျ ...ခွိခွိ
အမရေ.. အဲဒီအများကြီးထဲက တစ်ခုလောက်ဘဲ လုပ်ရင်မရဘူးလား။းဝ(
အရမ်းကောင်းတဲ့ နေရာလေးတခုပါ ပလန်းနက်မှာ ကတည်းက စာတွေဖတ်နေတာ အဲ့ဒီကနေ address ရလို့ ၀င်ကြည့်တာ အားပေးနေမယ်နော် မ........
အဲ့ဒါတွေထဲကတစ်ခုမှမလုပ်ပေမယ့် အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ၀င်ဖတ်သွားပါကြောင်းးးးးးး......း)
အသားအရေနဲ. ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေ ရှိသေးရင်လည်း ထပ်ပြီးဝေမျှပေးပါအုံးနော်...
ကျန်းမာရေးနဲ. ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးမှန်သမျှပေါ့.......ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်....